Isizinda se-Ultrasonic Elderberry - Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhishwa kwe-Elderberry kuyaziwa ngezindawo zazo zokulwa namagciwane futhi ngaleyo ndlela kusetshenziswa kakhulu njengekhambi lemvelo lokunciphisa izimpawu zomkhuhlane ezifana nomkhuhlane, ukukhwehlela, nomphimbo obuhlungu. Ukukhiqiza ukukhishwa kwe-elderberry nge-polyphenol ephezulu nokuqukethwe kwe-antioxidant, indlela elula yokukhipha kodwa esebenzayo iyadingeka. Isizinda se-Ultrasonic njengenqubo engeyona eshisayo, emnene isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni izitshalo ezisezingeni eliphakeme zezitshalo. I-Sonication inyusa isilinganiso sokukhishwa, isivuno kanye nekhwalithi yezikhangiso ze-elderberry.
Ama-Elderberries ayisithelo sesihlahla se-Black Elder (Sambucus nigra L.). Izithelo nezimbali ze-Elderberry ziyaziwa ngokunotha kwazo kuma-flavonoid namavithamini. Amajikijolo aqukethe inani eliphakeme lama-anthocyanini athile, futhi womabili amajikijolo nezimbali aqukethe amanani aphakeme ama-flavonol athile. Ama-Flavonoid anjenge-anthocyanins, ama-proanthocyanidins, ama-flavonol, ama-flavanones, nama-flavone angama-antioxidants e-polyphenolic, asekela amasosha omzimba futhi akhombisa izinzuzo ezahlukahlukene empilweni yonke. Ngokwengeziwe, i-elderberry inezindawo zokulwa namagciwane, anti-bacterial kanye ne-anti-cancer futhi ikhombisile ukuthuthukisa impilo yenhliziyo. Ikakhulukazi ama-flavonoids anika imikhiqizo yama-elderberry izindawo zawo ezihlukile zokulwa namagciwane.
Ukuthola inzuzo ephezulu ezintweni ezikhuthaza ezempilo i-elderberry, izinhlanganisela ze-bioactive ezinjenge-polyphenols, i-flavonoids, i-anthocyanins, namavithamini zikhishwa kwizithelo nezimbali ze-elderberry futhi zenziwa zaba ngumkhiqizo wezempilo ogxilile, onamandla amakhulu.
Amalungiselelo e-elderberry okuhweba okwelashwa komkhuhlane kanye nomkhuhlane atholakala ngezindlela ezahlukahlukene, kufaka phakathi uketshezi, ama-syrups, amaphilisi, amaphilisi, ama-lozenges nama-gummies.
Isizinda se-Ultrasonic – Indlela Yokukhipha ITurbo
Ukukhiqiza inani elikhulu lokukhishwa kwekhwalithi ephezulu ye-elderberry, inqubo ephumelelayo, kepha emnene yokukhipha iyadingeka. Ubumnene benqubo yokukhipha kubalulekile ukugwema ukonakala kwamakhemikhali e-bioactive. Isibonelo, ama-phytonutrients amaningi yi-thermo-labil, okusho ukuthi abola ngokushisa. Isizinda se-ultrasonic siyindlela engeyona eyokushisa, indlela yayo esebenza ngomshini kuphela. Isizinda se-Ultrasonic sisekelwe esizukulwaneni se-acoustic cavitation, esikhiqiza amandla we-shear kanye ne-turbulences ku-liquid extraction. La mandla okugunda okuphuca amandla aphazamisa iseli lesitshalo futhi akhiphe izinhlanganisela ze-bioactive, ezinjenge-polyphenols, anthocyanins, flavonoids namavithamini, ku-liquid / solvent. Ngenxa yokusebenza kwe-ultrasonic cavitation, isizinda se-ultrasonic singakhipha inani eliphelele le-bioactive phyto-izakhi zomzimba ezintweni eziluhlaza zezitshalo. Isizinda se-Ultrasonic sinika isivuno esikhulu kakhulu ngesikhathi sokucubungula esifushane kakhulu.
I UP400St iyi-400 watts enamandla ekhipha i-ultrasonic ukukhipha nokuhlukanisa ama-phyto-nutrient kuma-botanicals
Enye inzuzo ukuhambisana kwama-ultrasonics nganoma yiluphi uhlobo lwama-solvents. Ngenkathi amasu ajwayelekile wokukhipha njengokufaka i-soaking, i-maceration noma i-Soxhlet evame ukudinga ama-solvents anokhahlo futhi anobuthi, isizinda se-ultrasonic sikuvumela ukuthi ukhethe i-solvent oyithandayo. Isizinda se-Ultrasonic singenziwa kusetshenziswa izingxube zamanzi, zamanzi / zotshwala, i-ethanol, uwoyela wemifino namanye ama-solvents amnene. Ikakhulukazi (i-aqueous) ethanol isungulwe njenge-solvent enamandla futhi enokwethenjelwa, engashiswa kalula ngemuva kokukhishwa kanye nenani elishiyekile lokulandayo kulokho okukhishwe bekungeke kube yingozi.
I-Ultrasonication yindlela esungulwe kahle yokukhiqiza ukukhishwa kwekhwalithi ephezulu kusuka kuma-botanicals, isb. Izithelo nezimbali ze-elderberry. Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasonics inqubo yokuqinisa inqubo: Kwenza ukukhishwa kusebenze kahle ngokunikeza isivuno esiphezulu futhi kusheshise inqubo. Ngakho-ke, i-sonication yaziwa nangokuthi inqubo yokukhipha i-turbo.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Elderberry Extraction
Ukukhishwa kweTurbo kwamakhemikhali eBotanical ane-Ultrasonics
Njengenqubo yokukhipha i-turbo, ukukhishwa kwe-ultrasonication kuqinisa kakhulu ukwedlula ezinye izindlela ezivamile zokukhipha (isb. Ukumunca amakhaza, ukumnika, i-maceration, i-percolation njll.). Lokhu kungenxa yokuxubana okubangelwa i-ultrasonically, ukunciphisa usayizi wezinhlayiya, futhi ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukudluliswa okukhulu. Ngokudluliswa okukhulu kwesisindo, ukulingana kokuhlushwa phakathi kwento yezitshalo (i-biomass) ne-solvent ezungezile kutholakala ngokushesha okukhulu. Ngokushesha nje lapho lokhu kulinganiswa kokuhlushwa kufinyelelwe, isinyathelo sokukhipha siyaqedwa ngoba i-solvent ayikwazi ukumunca ama-molecule amaningi asebenzayo. Ukuxubana kwe-ultrasonic, ukusabalalisa nokunciphisa uketshezi lwe-botanical kufutha ama-molecule aqondisiwe avela kumatrix weselula wesitshalo aphume aye ku-solvent. Ngenkathi ezinye izindlela zokukhipha zidinga amahora amaningi noma izinsuku ezimbalwa, isizinda se-ultrasonic sitholakala kungakapheli imizuzu embalwa. Ukwelashwa okufushane, okungashisi kwe-ultrasonic kuvimbela ama-molecule asebenzayo ngokumelene nokuwohloka okubangelwa ukushisa.
Ukukhishwa Okuphezulu Kwe-Ultrasonic kokukhishwa kwe-Elderberry
Iphothifoliyo yomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele lwe-extractors ephezulu ye-ultrasonic kusuka ezincane kuya ezinkulu. Izesekeli ezingeziwe zivumela ukuhlangana okulula kokucushwa okuhle kakhulu kwedivayisi ye-ultrasonic yenqubo yakho. Ukusetha okulungile kwe-ultrasonic kuya ngomthamo ocatshangelwe, ivolumu, impahla eluhlaza, inqubo ye-batch noma i-inline kanye nomugqa wesikhathi.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo. Ngokuya ngevolumu yenqubo yakho kanye nokufakwa kwehora, kunganconywa ukucubungula okusemgqeni. Ngenkathi ukubheja kuthola isikhathi esiningi futhi kusebenza kakhulu, inqubo eqhubekayo yokuxuba ulayini isebenza kahle, iyashesha futhi idinga umsebenzi omncane kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics inokusetha okufanele kakhulu kokukhipha ivolumu yesizinda sakho nezinhloso zenqubo.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yemingcele yenqubo ebaluleke kakhulu ethonya ukusebenza kahle nokusebenza kahle kwesizinda se-ultrasonic sezakhi zomzimba ezi-bioactive kusuka kuma-botanicals.
Izinto ezingavuthiwe ezinjengamajikijolo athambile zidinga i-sonication enamandla nezilungiselelo ze-amplitude eziphansi, ngenkathi amaqabunga aminyene noma imbewu enegobolondo eliqinile futhi eliqinile idinga i-sonication kuma-amplitudes aphakeme ukukhipha izinhlanganisela ze-intracellular. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Ama-Pharmaceuticals and Supplements aqukethe i-Elderberry
Ukukhishwa kwabadala abamnyama kanye nama-elderberry kwenziwa ngendlela eyodwa noma emikhiqizweni eminingi equkethe umdala omnyama. Ukukhishwa kwe-elderberry okumsulwa yimikhiqizo efana ne-Sambucol® (Sambucol, Pharmacare US Inc., San Diego), Rubini® (Rubini, Iprona AG Via Industria LANA, Italy) nezinye izinto ezikhishwe yi-S.nigra noma ama-syrups, kanye ne-black older equkethe izinto eziningi imikhiqizo yemifino efana neSinupret® (Sinupret, Bioforce USA). Ukukhishwa kwe-Elderberry nemikhiqizo equkethe i-elderberry kunikezwa ikakhulukazi ukuqinisa amasosha omzimba nokwelapha izimpawu zomkhuhlane kanye nomkhuhlane.